Wasiirka Beeraha Oo Sheegay Inuu Ayaxu Ka Awood Badiyay Dagaalkii Lagu Qaaday – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Wasiirka Beeraha Oo Sheegay Inuu Ayaxu Ka Awood Badiyay Dagaalkii Lagu Qaaday
Hargeysa(Geeska)-Wasaarada beeraha ayaa daboolka ka qaaday in uu ka awood badiyay Ayaxii ku habsaday xeeba Bada Cas,isla markaasna uu u gudbaayo dalalka Itoobiya iyo Jabuuti.
Sida oo kale waxa ay wasaaradu shaacisay in daawooyinka khatarta ah ee lagu laayo Ayaxa in aan la isticmaalin, sababo la xidhiidha in deegaanadaas ay ku nool yihiin dad iyo duunyo badan, waxaanay wasaarada beerahu isugu yeedhay haayadaha FAO iyo DLCO mar labaad.
Waxa sidan lagu sheegay War-saxaafadeed ka soo baxay wasaarada beeraha oo uu ku saxeexan yahay wasiirka beeraha Prof.Faarax Cilmi Geedoole, isaga oo dhamaystirana waxa uu u dhignaa sidan“Wasaaradda Beeraha Somaliland Waxay cadaynaysaa iyadoo horena dhowr jeer digniino u soo saartay in ayaxii ku habsaday xeebaha Badda Cas ee Somaliland oo haatan khatar ku hayo deegan-daaqsimeedka gobalada Selel, Awdal, Saaxil iyo Sanaag.
Ayaxaasi oo haatan dam ka siiyey daaq badan, gaar ahaan Banka Giriyaad, Lughaya, Cabdi-geedi, Ceel-darad iyo Banka Goobaare, wuxuu ayaxaasi oo haatan korankor ahi u gudbayaa dalalka Itoobiya iyo Djabuuti.
Waxa jirta in xiligan xoolo aad u fara badani ay ku sugan yihiin jiidahaasi ayaxu ku habsaday oo ay adagtahay in la isticmaalo sunta kiimikada ah ee lagu buufiyo ayaxa Sida “MALATHION”.
Sidaasi darteed, wasaarada beeruhu waxay ku talo bixinaysaa in aan lagu deg-degin in loo isticmaalo sunta khatarta ku ah xoolaha, dadka iyo deegankaba, balse loo isticmaalo habka makaanikalka ah.
Wasaaradu waxay ka waddaa jiidahaasi daawo aan xoolaha iyo dadka toona u lahayn dhibaato, hasa yeeshee ayaxa ayaa ka baaxad waynaaday arintaa.
Wasaaradu waxay si deg-deg ah isugu yeedhay Hay’adaha Caalamiga ah ee ay khusayso arinta ayaxa sida FOA iyo DLCO markii Labaad.”